အွန်လိုင်းစွဲစွဲလမ်းမှုနှင့်အန္တရာယ်ရှိသောအွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများတွင်ပါ ၀ င်မှုကြားတွင် Online မှ erotica အသုံးပြုမှု (Your Brain On Porn)
အန္တရာယ်များအွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေအတွက်အင်တာနက်စွဲလမ်းနှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုများအကြားတစ်ဦးဖျန်ဖြေ (2016) အဖြစ်အွန်လိုင်း erotica အသုံးပြုမှု
Cyberpsychology: ဆိုက်ဘာစပေ့အပေါ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသုတေသနဂျာနယ် 10 မရှိ။3(2016) ။
Michelle Drouin, ဒံယေလအေ Miller က
ဒီလေ့လာမှုမှာကျနော်တို့သူတို့အားလိင်-ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာဓာတ်ပုံများကိုမပို့, ဤကိစ္စတွင်အတွက်, အင်တာနက်စွဲလမ်း, (လိင်-based အင်တာနက်ကိုချက်တင်က်ဘ်ဆိုက်များ၏ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုနှင့်အသုံးပြုမှုအပါအဝင်) အွန်လိုင်း erotica အတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုများနှင့်အန္တရာယ်များအွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုအကြားလင့်များလေ့လာ သာအွန်လိုင်းလူသိများ (ဆိုလိုသည်မှာ sexting) နှင့်သာအွန်လိုင်းလူသိများသူတို့နှင့်အတူအော့ဖ်လိုင်းလိင်အတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့မျှော်လင့်။ 276 အမေရိကန်လူကြီးများကျွန်တော်တို့ရဲ့နမူနာမှာတော့ယောက်ျားသည်ဤအွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများအများစုတွင်အမျိုးသမီးများထက်သိသိသာသာပိုပြီးစေ့စပ်, ဒါပေမယ့်အမျိုးသမီးတွေယောက်ျားအွန်လိုင်းချက်တင်မိတ်ဖက်ဖို့လိင်-ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာဓါတ်ပုံတွေကိုပေးပို့ဖို့အဖြစ်နည်းတူဖွယ်ရှိခဲ့ကြသည်, သူတို့သည်လည်းယောက်ျားအဖြစ်နည်းတူဖွယ်ရှိခဲ့ကြသည် အင်တာနက်စွဲလမ်း၏အရိပ်လက္ခဏာပြသရန်။ ပို. အရေးကြီးသည်, ညစ်ညမ်းခြင်းနှင့်လိင် site ကိုအသုံးပြုမှုကို အသုံးပြု. အန္တရာယ်များအွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများတွင်အင်တာနက်စွဲခြင်းနှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုအကြားဆက်ဆံရေးအတွက် sequential ပြုပြီခဲ့ကြသည်။ အပြုအမူကြောင့်သာအွန်လိုင်းလူသိများသူတို့နှင့်အတူ sexting သို့မဟုတ်အော့ဖ်လိုင်းလိင်၏မျှော်လင့်ချက်များအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကြိုတင်ခန့်မှန်းခဲ့တယျအငျတာနကျလိင်ချက်တင်က်ဘ်ဆိုက်များတွင်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့ဆိုးရွားလာခဲ့သည်သည့်အခါထိုမှတပါး, ညစ်ညမ်းတစ်ဦးတည်းကြည့်ရှုသော်လည်း, အန္တရာယ်များအွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများတစ်ဦးခန့်မှန်းမရဖြစ်ခဲ့သည်။ ဤအတွေ့ရှိချက်အပေါ်အခြေခံပြီးကျနော်တို့ကဤအပြုအမူအွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှု၏တဦးတည်းထီးအောက်မှာထည့်သွင်းစဉ်းစားစေခြင်းငှါပေမဲ့, ကတိကျသောအွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများ (ဥပမာလိင် site ကိုအသုံးပြုမှု) ပစ်မှတ်ထားတစ်ခုဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုနှင့်ကုသမှုရှုထောငျ့မှအသုံးဝင်သောဖြစ်အံ့သောငှါအကြံပြုအပ်ပါသည်။
Drouin, အမ်, & Miller ကဃ (2016) ။ အန္တရာယ်များအွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေအတွက်အင်တာနက်စွဲလမ်းနှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုများအကြားတစ်ဦးဖျန်ဖြေအဖြစ်အွန်လိုင်း erotica အသုံးပြုမှု။ Cyberpsychology: ဆိုက်ဘာစပေ့အပေါ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသုတေသနဂျာနယ်, 10(3), ဆောင်းပါး2။ http://dx.doi.org/10.5817/CP2016-3-2
အင်တာနက်စွဲ; အွန်လိုင်း erotica; sexting; အန္တရာယ်များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ; အွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေ